Ålọ nkwari akụ na Reslọ oriri na ọ Resụ |ụ | Nleta Hultsfred
hem » ulo » hotel » Målilla Hotel & ålọ oriri na ọåụ .ụ
Målilla Hotell bụ obere họtel nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ. A na-enye nri ehihie taa, la carte, Pizza na salads ebe a. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ hasụ nwere ikike zuru oke. Enwere oche ime ụlọ 40 na oche 20 n'èzí.
Mọnde: 11–15Tuzdee: 11–15:Bọchị Wenezde: 11–15.Tọzdee: 11–15Fraịde: 11–15Bọchị Satọde: 11–15Bọchị Sọnde: 11–15
Nzọụkwụ 10, 570 82 Milili, Sverige
3.3 si 5.0
Nyocha 124 na Google
1/5 otu izu gara aga
Nwoke a na-enyo enyo na 30s ya na-agba ọsọ gburugburu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eti mkpu ma na-akpa àgwà dị ịtụnanya. ndị nwe obi ọjọọ na-akpọ gị onye ịkpa ókè agbụrụ ozugbo ị na-eme mkpesa banyere ha ma ọ bụ ahụmahụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke na-adịghị ọnụ. nri a na-agbanye mmanụ na-atọ ochie. Nwoke ahụ a na-amaghị ama ledokwara m mgbe m na-eri nri, n'amaghị ama.
2/5 ọnwa gara aga
Ee hey ọ bụ Ryan ebe a ọzọ. Abụ m nwa onye nwe ma anaghị m anabata okwu ọjọọ ọ bụla na nyocha anyị. Anyị enweghị ụmụaka zoro ezo na họtel. Ikekwe nna m nwere ụfọdụ ụmụaka n'ime okpuru ulo nke ya mana anyị enweghị ụmụaka zoro ezo na họtel! Anyị enweela ahụhụ akwa mana ha na-aga ugbu a ka anyị nyere iwu ka mmiri na-ekpochapụ ihe niile ahụ. Anaghịkwa m agba ọsọ na-eti mkpu na ọ bụ ụgha. O tiela mkpu ugboro ole na ole na ndị ahịa anyị mana ọ dịghị ọzọ!
1/5 ọnwa gara aga
Ọ bụ nwoke ụfụfụ na 30s ya na-agba ọsọ na-eti mkpu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nkwari akụ ị na-enwe ntakịrị nchegbu ugbu a na mgbe ahụ. Mgbe m na-aga mposi, ahụrụ m ya ka o ji ihe ụmụaka ji egwuri egwu na-egwuri egwu. Ahụ́ erukwaghị m ala ọzọ maka ụzụ na iti mkpu nwoke a na-eme. Tụkwasị na nke ahụ, ahụrụ m ya ka ọ na-abara ezinụlọ dum mba kpam kpam n'enweghị iwe! N'etiti ndị ọrịa m ụzọ. Ọ ga-abụ kpakpando 1 n'ebe m nọ. Abịala ebe a.
Nnọọ n'ebe anyị mara mma. Achọrọ m ichetara gị na onye ahụ mere ka ọ̀ bụ m bụ Johan Norberg, ya na nne ya na nna ya bi na Norrbotten, ha agatụbeghị ebe anyị mara mma. Enweghị m lice na m ka na-arụ ọrụ na sets PS nwere ọrụ ọzọ na ọ dịtụbeghị mgbe m mepụtara akaụntụ adịgboroja dị ka nke ahụ enweghị m oge ịsa ahụ na ịsa ezé m ma gbanwee uwe m ga-eme enweghị ike ịga n'ihu ndị ahịa. ma na-esi ísì ọjọọ ọ chọghị ka onye ọ bụla mee. Ee ee sim mere ka ọ bụ m debanyere aha. Daalụ ndị ọzọ ndị kwuworo okwu magburu onwe ya ma nwee mmasị na ebe anyị nabata ọzọ.
Onye ọrụ Staffan Söderlund
Ọmarịcha ikuku ịnabata. Nọrọ na mgbakwunye, ụlọ dị mma ma dịkwa mma nke nwere ezigbo akwa. Nri ụtụtụ dị mma mana ọ ga -abụrịrị na ọ sara mbara.
2022-01-04T20:40:42+01:00hotel, ụlọ oriri na ọṅụṅụ|
Hotelslọ nkwari akụ niile